Shiinaha Oo dadka muslimiinta ah ka mamnuucay Magacayada Muslimiinta waxa ugu horreeya magaca…….. | Xaqiiqonews
Shiinaha Oo dadka muslimiinta ah ka mamnuucay Magacayada Muslimiinta waxa ugu horreeya magaca……..
Wargeyska New Yorka times ayaa qoray warbixin xasaasi ah oo kau saabsan go,aan madaxda dalka shiinaha qaateen oo ahaa in dalkaasi laga mamnuucay magacyada qaar ee ay la baxaaan muslimiinta waxaana ugu horreeya magaca muxamed .
gobolka Xinqiang ayaa laga mamnuucay muslimiinta ku nool gobolkaasi in ay isticmaalaan magacyada muxamed,mujahid,jihad iyagoo mamnuucistooda marmarsiiyo kaga dhigay in magacyadani ay muujinayaan xagjirnimo.
Sida uu qoray wargeyska New yorka times kala bar dadka dagan gobolka Xinqiang waa muslimiin waxaana uu wargeyska sheegay in dadka dagan gobolkaasi cadadkooda gaaraayo 10 milyan oo qof.
hase ahaate tirokoobyo kale ayaa burinaya tiroobka wargeyska sheegay waxaana lagu qiyaasay dadka dagan gobolada barri ee dalka shiinaha oo gobolkani Xinqiang ku jiro in ayaa gaarayaan ilaa 25 milyan oo kala bar ay muslimiin yihiin.
Waxaana asalka dadka dagan gobolda barri ay ka soo jeedaan dalka Uzbekistan oo ay deris yihiin.
horay ayaa shiinaha waxaa u soo saaray go,aano badan oo lagu caburinaayo dadka muslimiinta ee dagan goboladan waxaana ka mid ahaa in la mamnuucay in garga la deysto, in xijaab dumarka qaataan marka basaska la saaranyahay iyo xitaa in la soomo bisha ramadaan sida warbixinada qaar ay sheegeen.